China Multi-function Large Nappy Bag Mummy Diaper Backpack ho an'ny Baby Care Travel orinasa sy mpanamboatra |Flyone
Kitapom-behivavy Mamy Diaper Backpack ho an'ny Travel Care Baby
lanja entana: 0,7 kg
Ny haben'ny vokatra: L27 x H42 x D24cm
1. Ampiasao foana ny fitaovana amin'ny kalitao tsara indrindra - Mampiasa ny kalitao avo lenta amin'ny lamba lanezy vita amin'ny ranomandry ary mora kosehina madio, aza matahotra ny fiparitahan'ny ronono / rano amin'ny kitapo.
3. Multi Function - Azonao ampiasaina ity kitapo ity ho kitapo sy kitapo.Tena kanto ary mety amin'ny fotoana maro toy ny fiantsenana, fitsangatsanganana sns.
Laharan'ny entana LH056
1. ATAOVY NY FAMPIANARANA HANATSARA NY FAHAVOKATRA
Namboarina tamin'ny fehin-tsoroka vita amin'ny padded mampahazo aina eo am-pitrotroana ny zanakao sy ny tontonana aoriana miaraka amin'ny endrika fikorianan'ny rivotra mba hihazonana rivotra ny lamosinao mamela ny hafanana hiala amin'ny sorokao sy ny lamosinao.Ity kitapo diaper matanjaka ity dia mahatonga azy hijoro amin'ny fotoana rehetra.
2. BONUS ADDED MAIMAIMPOANA
Hahazo Hooks stroller 2 azo esorina koa ianao rehefa tsy te hanana ny kitapo diaper ao an-damosinao ianao amin'ny fametahana azy ireo amin'ny stroller, 1 lehibe Changing Pad miaraka amin'ny pad foam malefaka izay mahazo aina sy madio toerana ho an'ny zanakao.Fanampiana 1 kitapo mando sy maina tonga lafatra ho an'ny kitapo fitaizana zaza na fanovana akanjo.Izany dia hanampy anao amin'ny filan'ny zanakao ary miaraka amin'ny stylish natao hifanaraka amin'ny kitapom-batanao.
3. ANTOKO AZO AFAKA
Mijoro ho an'ny QUALITY izahay, ny kitapo diapery dia tohanan'ny Garantier Manufacturer.Fantatray fa ho tianao ity kitapo diaper ity toa anay.
teo aloha: Fashion diaper mummy bag diaper backpack ho an'ny reny sy ny zaza vao teraka
Manaraka: Kitapom-jaza miaraka amin'ny kitapom-pitaterana maro azo ampiasaina amin'ny fitsangatsanganana misy kitapo fanoloana pad Grey Baby Diaper Backpack
Maro-Function tantera-drano lehibe Travel Baby Nap...
Zazakely mihantona diaper stacker garderie caddy organ...